Dabballootni Wayyaanee Sababa amantii xureessitan jedhuun Baha Wallaggaa Godina Horroo Guduruu keessaa ilmaan Oromoo hidhaa jiran.
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 11,2009) Maddeen oduu keenyaa akka gabaasanitti, sabboontotni Oromoo Baha Wallaggaa Godina Horroo Guduruu keessaa maqaa amantii xureessan jedhuun dabballoota wayyaaneen dharaan yakkamanii hidhaatti darbamaa jiran.
Haala kanaan namootni hedduun akka dhaanamanii fi hidhaman kan ifa godhe oduun kun, amma illee namootni baay’een badii malee hidhamaa jiraachuu ibse. Oromootni baay’een kan hidhamaa jiran Oromummaa fi sabboonummaa qabaniin yakkamanii ti malee amantii xureessan kamuu akka hin qabne kan ifa godhe oduun kun, jiraattuu magaalaa Shaambuu kan ta’an maanguddoon Oromoo ganna 45 aadde Mootuu Namarraa Jaaluu jedhaman keessatti argamu.
Ilmaan Oromoo dharaan yakkisiisee akka hidhaman kan godhaa jiru barattoota Oromoo irratti yakka raawwatuun kan beekamu waardiyaa mana barumsaa sad.2ffaa Shaambuu kan turee fi yeroo ammaa wayyaaneen aangoon kan kennameef nama Amsaaluu jedhamu ta’uu oduun kun mirkaneessee jira.
Oduuma wal fakkaatuun dabballootni wayyaanee Godina Lixa Shawaa magaalaa Ambootti hordoftoota amantii Kiristaanaa fi Musliimaa walitti diruuf shira xaxaa akka jiran bira ga’ameera. Humnootni badii wayyaanee kun manneen kadhannaa ummataa dhokatanii halkan ofumaaf gubanii hordotoota amantii Kiristaanaa fi Musliimaa wal dura dhaabuuf ijibbaataa jiran.
Ummatni shira wayyaanee walitti bu’iinsa amantii xaxuuf olii fi gadi fiigaa jiru kanatti dammaqee gamtaan dura dhaabbachuu akka qabuu fi shira diinaa kanaan wal dura dhaabbachuu akka hin qabne sabboontotni dhaamsa dabarsaniiru.
Wayyaaneen maqaa WBO balleessina jedhuun godina Harargee Dhihaa Onoota hundaa irraa milishoota walitti guurtee leenjisaa akka jirtu maddeen gabaasan.
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 11,2009) Wayyaaneen Harargee dhiyaa Onoota hundaa irraa milishoota walitti guurtee magaalaa Mi’eessoo bakka dirree xiyaaraa jedhamutti leenjii kennaafii akka jirtu MOAn gabaasa. Kunis maqaa WBO dhabamsiisuu jedhuun ta’uun barameera.
Kana malees WBO sakatta’uuf, konkolaataa 6n waraana dhaabbataa fi miliishaa wal keessa fuudhuun karaa Daaroo Labuu bobbaasuun ummata gidirsaa jirti. Waraanni konkolaataan 2 ammoo gara Bookee Taffee akka geeffame maddeen keenya ibsaniiru.
Karaa biraan nannoo Dirree Dhawaatti namin misheensa keenya hin taane jiraachuu hin danda’u jechuun, Hafoosha ummataa keessa seenanii ummata jeeqaa akka jiran maddeen keenya Dirree irraa gabaasanii jiru.